Buy အကင်​စက်​ (16,000 Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
အိမ်မှာမိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းများစုပြီး partyလုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသား ငါး ငါးခြောက် အသီးအနှံများကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကင်စားလို့ရတဲ့စက်လေးပါ
BBQ ကြိုက်သူများ၊ မိသားစုများ၊ သူငယ်ချင်းများ အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျ ကင်စားလို့ရတဲ့ အကင်စက်ပါ.
မီးသွေး၊ ဂက်စ် မလိုပဲ လျှပ်စစ်မီးရှိရုံဖြင့် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်.
ဖြုတ်၊တပ်လို့ ရလို့ ဆေးကြောရာမှာလည်း လွယ်ကူပါတယ်​
မိသားစု စုံစုံလင်လင် အကင် စက်လေးနဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း
ကင်စား လို့ ရပြီနော်။
- အိမ်မှာ မိသားစုနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ သူငယ်ချင်းတွေ စုပီး Party လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသား ၊ ငါး ၊ အသီးအနှံ များကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကင်စားလို့ရပါတယ်ရှင်။
- လျှပ်စစ် နဲ့ အသုံးပြုရပီး မီးအပူချိန်ကိုလဲ လိုသလို အတိုးအလျှော့ ချိန်ဆလို့ရပါတယ်။
- ဆီခံပြားပါတဲ့အတွက် ဆီတွေကွိုင်ပေါ်ကျမှာလဲ ပူစရာမလိုပဲ
- အိမ်မှာ အချိန် မရွေး ကင်စားလို့ ရပြီး မီးမွှေးစရာမလိုတဲ့ အတွက် အလုပ်ရှုပ်လည်း သက်သာစေပါတယ်ရှင်။
- အသားတွေဘဲ ကင်ကင်၊ အသီး အရွက်ဘဲ ကင်ကင် အကုန်ကင်လို့ ရပါတယ်
- အပူချိန် အတိုးအလျော့ ခလုတ် ငါးခု ပါပြီး မီးပြင်းလျှင် လည်း အချက် ပြ ပါတယ်ရှင်။
(2000W ဆို တော့ မီတာ လဲ သက်သာ ပါ တယ် )
🏙🏙mdy မြို့တွင်းကိုတော့ door to door delivery charges များကို နေရာအလိုက်1500/2000/2500k/3000k